Yaadannoo FDG (1995-2006) – Oromedia
Home » Siyaasaa » Yaadannoo FDG (1995-2006)
Seenaa Fincila Diddaa Gabrummaa Oromoo seenaa gabroomfama Oromoo waliin hidhata jabaa qaba. Ummati Oromoo guyyaa kiyyoo kolonii jalatti kufee kaasee diddaa fi falmaa addaddaa gochaa jira. Keessayyuu, diddaan kun baroota as dhiyoo keessa qaama dhaloota haaraa fi barattoota Oromoo ta’uun bakka iyyuutti babal’achaa, wareegamni diddaa kana keessatti baafamaa jius dabalaa jira. Kaayyoon barruu kanaan seenaa FDG gabrummaa seenessuu miti; garuu dhalooti har’aa waan dabre akak yaadataniif, yaadannoo gabaabaa FDG kana bara 1995 kaasee haga bara 2016 jiru gabaabsee dhiyeessa.
Barattooti Oromoo qaama haawaasaa kamiyyuu caalaa gochaa diinaa hubachuun hirmaannaa isaanii jabeessuutti jiran. Bara 1990moota keessa barattoti Oromoo hojii farrummaa mootummaan Wayyaanee kana karaa hedduu ummata Oromoo hacuucaa jiru saaxilaa turan.Yeroo sanatti, keessayyuu gobachuu bosona Oromiyaa mormuudhaan, maqaa tuffiin Oromoon waamamuu mormuu dhaan, magaalan guddittin Oromiyaa Finfiinnee irraa Adaamaatti dabruu mormuu dhaan, ajjeechaa fi hidhaa ilmaaan Oromoo irra gahu mormuu dhaan, ifatti wal gurmeessanii mootummaa Wayyaanee dura dhaabbataa jiru. Sababa kanaafis mannee barnootaa irraa arihamaniiru; hedduun hidhamanii gidiraa arganiiru. Kaan ammoo baqatanii biyyaa bahaniiru. Warri kaanis Qubee Afaan Oromoo fi Seenaa Saba Oromoo barsiifamuu eegalamee, akka itti fufu gochuun dirqama eenyummaa isaan irraa eegamu utuu bahanii wareegama qaamaa fi lubbuu kanneen itti baasan hedduu dha. Isaan keessaa warra urjii ta’anii fi garmalee ajjeefaman fakkeenyumaaf yoo kaafne malee hundaa tarrisuun hin salphatu. Warra gootummaan afaanii fi seenaan ofii eenyummaa ofiiti jedhanii itti cichanii utuu barsiisanii aarsaa lubbuu baasan keessaa Shifarraa Fayyisaa tokko.
Hagayya 20 bara 1995 barataa Yuniversitii waggaa 3ffaa kan tahe Shifarraa Fayyisaa mana jireenyaa isaa keessaa gad waamamee poolisii mootummaatiin ajjeesame. Mana isaas sakattaa’anii dokumantii isaa saaman. Sanaan booda reeffa isaa mana yaalaa (Hospitaala) Miniliikitti gatanii deeman. Reeffi Shifarraa awwaalamuu kan danda’e, warri isaa reeffota namoota haala fakkaataan kan wareegamanii mana yaalichaatti gataman keessaa barbaaddatanii erga argatanii ture. Du’a isaaf sababni kenname hin jiru. Shifarraan fedhii isaatiin qubee Laatiin Afaan Oromoo barsiisaa ture. Ilmaan Oromoo eenyummaa isaaniin boonanii fi afaan isaanii dagaagfachuuf Yuniversitii Finfinnee keessaa carraaqan keessaa tokko ture.
Bartootni Oromoo sadarkaa adda addaa baratanii fi akkuma Shifarraa Fayyisaa, kanneen sababa Qubee Afaan Oromoo fi seenaa Saba Oromoo barsiisuu qofaan yakkamanii haala fakkaataan gaagaa’aman hedduu dha. Warri kaanis qabeenya uumaa Oromiyaan qabdu dhabama irraa dandamachiisuuf qooda guddaa kennaa turan; kennaas jiru. Kana keessaa tokko duulli bosona Oromiyaa irraa ibiddaa dhaamsuuf godhan, seenaa qabsoo barattoota Oromoo bara mootummaa Wayyanee keessaa isa tokko.
Qabeenya uumaa Oromoo kan ta’e, bosonni Oromiyaa, ibiddaan gubachaa yeroo jirutti, mootummaan naannoos ta’e kan Feederaalaa, ilaalcha kennuufii dhabuun isaanii,inumaayyuu hooggantoonni sirnichaa ayyaana hundeeffama Wayyaaneen dahatanii Maqaleett argamuun shubbisaa jiraachuufi bosona manca’aa jiruf xiyyeeffannoo kennuu dhabuun, kan isaan belbelche bartootni Oromoo Yuniversitii Finfinnee, waajjira bulchiinsa naannoo Oromiyaatti hiriira bahuun, ibiddicha dhaamsuuf of kenniinsaan duuluuf gaafatan. Gaaffiin kun Yunversitii Finfinnee, Kolleejjota adda addaa fi manneetii barnota sadarkaa 2ffaa Oromiyaa keessaa waliin ga’e. Manneetii barnootaa sadarkaa 2ffaa yeroo san hirmaatan keessaa angafti kan Amboo ti. Itti aansuunis qabeenyaa keenya irraa ibidda dhaamsuuf haa birmannuun Oromiyaa guutuu waliin gahe. Beelaa fi dheebuu utuu hin jenne gara bosona gubataa jiru Baalee fi Gujii keessaatti murannoon haala dhiibbaa fi hordoffii guddaan irra jiru jalatti birmachuun qabeenyaa fi eenyummaa isaafii hinaafoo ta’uu mirkaneessani.
Sochii mooraa Yuuniversitii keessatti haala kanaan eegalee fi mormii Finfinneen magaalaa gudditti Oromiyaa ta’uun haqamuun wal qabatee, barattootni Oromoo baay’een, humna tikaa fi poolisii mootummaa Wayyaaneen reebamanii hidhamaniiru. Kanneen sochii kana keessatti reebaman, hidhaan dararamanii fi ajjeesaman danuu dha. Hundumaa tarrisuun salphachuu baatullee fakkeenyumaaf daddabarree maqaa dhahuun fardii dha. Isaanis:
1ffaa Geetuu Dirribaa barataa sadarkaa 2ffaa Amboo irraa Poolisii Mootummaan itti dhukaafamee kan ajjeefamee dha. Gaafas hiriyyoonni isaa kanneen rasaasaa fi uleedhaan madaawanii fi hidhaan hiraarfaman hedduu dha.
2ffaan barattuu Dirribee Jifaar, mana barnoota sadarkaa 2ffaa Dambi Dolloo irraa Poolisii mootummaan kan ajjeefamte oggaa taatu, hiriyyoonni ishee reebamanii fi madaawan baay’ee dha.
Baruma 2000 kana keessa lammii Tigiree kan ta’e Geetaahuun Kaasaa, ceephoo qor-qalbii Oromoo tuqu barreessuu isaa irraa, barattootni Oromoo Yuniversitii Finfinnee mormii qaban waan ibsataniif hedduun qabamanii hidhamuun barnoota isaanii irraa ugguramani hanga 2001tti kaa’aman. Kana malees, obboleewwan isaanii barataa jiranis, humna tikaa mootummaan ba’uu fi galuu to’atamuun walabummaa waan dhabaniif, “Academic freedom“ Walabummaan barachuu gaafatani. Kana haaloo qabachuun, barattoonni Oromoo bakka dhaqanitti adamsamanii kanneen hidhamanii fi ajjeefaman keessaa kan yoomuu hin irraanfatamne Simee Tarrafaa ti. Simeen ilma Oromoo Yuniversitii Maqaleetti baratuu fi Oromummaa isaa qofaaf ajjeefamee magaalaa irraa km 7 fageeffamee gatamee dha.
Gaaffiin mirgaa fi saba isaaniif falmuu barattoota Oromoo Yuniversitootaa fi kolleejjota adda addaa biyyattii keessaa, hanguma miidhaan Oromoo irratti jabaataa deemeen, caalaatti cimaa dhufe. Bara 2002 keessa “gibirri fi gatiin xaa’oo qotataaf haa hir’atuu fi xaa’oon kennamus kan laficha daran hin borqeessine ta’uun isaa haa qoratamu!” gaaffiin jedhu belbeltuu ta’e. Sababa kanaan warra barnoota isaanii irraa arihamanii fi hidhaman malee, kanneen lubbuuun wareegaman keessaa yoo maqaa dhoofne:Mulugeetaa Akkasaa, Ittafaa Fiqaaduu, Asaffaa Fiqaaduu, Balaay Baay’isaa fi Baay’isaa Baabsaa Shaambu sadarkaa 2ffaa irraa humna poolisii mootummaan ajjeefaman.
Barattootni Oromoo tarkaanfii jiilchaa mootummaan fudhatu kanaan utuu of duuba hin jenne, bara 2003 keessas Finfinnee irratti mirga dhabuu Oromoo fi hojjetootni Oromoo baay’een qe’ee fi qabeenyaa saacaa’anii jiran irraa buqqifamuu Waldaa Maccaa fi Tuulamaan wal tumsanii hiriira mormiii ba’an. Sababa kanaaf barattootni 24 Yuniversitii Finfinnee irraa, 20n ammo Yunivarsiitii Jimmaa irraa ari’aman. Kanneen hidhamanii dararamanis hedduu dha. Daafii kanaan barataan Oromoo Nadhii Cawwaaqaa Yuniversitii Maqaleetii barataa jiru achitti adamsanii reebichaan miidhaa guddaa erga irraan ga’anii booda bakkeetti gatame. Sochii Naqamtetti ta’eenis barattuu Amalawarqi Bulii ajjeefamte.
Mirgi ummatni Oromoo Finfinnee irratti qabu haqamee, Waajjira bulchiinsa naannoo Oromiyaa gara Adaamaatti akka dabruu murtiin duraan kenname, 2004 dalagaatti jijjiiramuun isaa, sab-boontota Oromoo hunda kan aarse ta’uun isaa ifaa dha. Haala kana irratti barattootni Oromoo fi Waldaan Maccaa fi Tuulamaa (WMT) hiriira nagaa waliin qindeeffachuun mormii qaban ibsatan. Kana irraas hedduun isaanii hidhamuun dararamaniiru. Utuu kanaan jiruu, do’ii aadaa OPDOn qophaa’e argisiisuuf mooraa Yuniversitii Siddisti Kiiloo keessatti mormii ka’een ammas hedduun reebamanii hidhaman. Yuunivarsiitii Finfinnee keessaa barattoota 347 fi Yuunivarsiitii Jimmaa irraa ammoo 18 barmoota irraa arihaman.
Tarkaanfii gara jabinaa mootummaan fudhatu kun caalaatti falmachuuf, gootota barattoota Oromoo kakaase malee tasa hin callisiisne. Akka kanaan, ji’a Sadaasaa 2005 irraa eegalanii kanneen sadarkaa adda addaa barachaa jiran, guutummaa Oromiyaa keessatti Fincila Diddaa Gabrummaa (FDG) finiinsaa jiru. Kana keessatti wareegamni baafamaa jiru, daanga dhabeessa. Warra sababa kanaan hidhamanii dararamuun itti roorrifame malee, kanneen aarsaa lubbuu baasan hedduu keessaa daddabrinee maqaa dhahuuf:
Jaagamaa Badhaanee fi Kabbadaa Badhaasaa mana barnootaa sadarkaa 2ffaa Amboo irraa,
Lachiisaa Dhaabasaa mana barnootaa sadarkaa 2ffaa Xuqur Incinnii irraa,
Malkaamuu Tafarraa fi Dabalaa Oliiqaa mana barnootaa sadarkaa 2ffaa Innaangoo irraa,
Habtaamuu Baay’isaa, Fiqaaduu, Abbabaa Jaagamaa, Waaqjiraa Tafarraa,
Nuurasaa Girmaa fi Burtukaan mana barnootaa sadarkaa 2ffaa Jalduu irraa,
Jamaal Leencoo mana barnoota Qoree irraa,
Ahimad Iluu, Fayyisaa (Fayisaal) Duulaa, Habiiba Raggaasaa mana barnootaa sadarkaa 2ffaa Kofalee irraa,
Aannanee Addaamuu mana barnootaa sadarkaa 2ffaa Mandii irraa,
Hayilee Dastaa mana barnootaa sadarkaa 2ffaa Finca’aa irraa,
Ahmad Abdul-Jabbaar mana barnootaa sadarkaa 2ffaa Kombolacha (Harargee Bahaa) irraa,
Kunzaa Yaasin barattuu sadarkaa 2ffaa Galamsoo/Baddeessaa (Harargee Dhihaa) irraa,
Jireenya Nagaraa, Kutaa 10 oso baratu, bara 2005 dhuma baatii Sadaasaa keessa hiriira high school irra gara magaalaa Amuruutti ba’ame irratti humna mootummaatiin rukutamee wareegame.
Alamaayyoo Garbaa fi Gaaddisaa Hirphasaa Yuniversitii Finfinnee irraa poolisii, humna addaa fi waraana Agaaziin ajjeefaman.
Kanneen akka Mahaammad Xayib, Morkataa Iddoosaa fi kkf sochii bartootaa kanaan walqabatee manneen hidhaa wayyaaneefi bakkoota adda addaatti warra wareegama lubbuu baasan keessaa ti.
Kanneen hundi haqaa fi mirga saba Oromoof jecha barattoota Oromoo durummaan dhaabbatanii bara 2006 keessa wareegamanii dha.
Hunda caalaa garuu gootota ilmaan Oromoo,Alamaayyoo Garbaa fi Gaaddisaa Hiphasaa, irratti kan raawwatame baay’ee suukanneessaa dha. Oggaa bartootni Oromoo 347 Yuunivarsitii Finfinnee keessaa sababa mormii magaalaa guddittiin Oromiyaa gara Adaamaatti jijjiiramuun arihaman sana isaan ammoo hidhamanii hedduu hiraarfaman. Manneetii hidhaa Maa’ikalaawii fi Karchalee Finfinneetti, booda ammoo mana hidhaa Qaallittiitti daddabarsamanii hidhamanii hiraarfamaatura.Alamaayyoon fincila filannoon walqabattee biyyattii keessatti ka’ee Sadaasa 2005 gara finfinneetti babal’ate keessa beekaa itti yaadamee iddoo inni ciisutti rasaasaan rukutamee ajjeefame. Barataa (Civil Engineering) waggaa 4ffaa kan ture Gaaddisaanis, mana hidhaa Qaallittii keessatti hooggantoota Waldaa Maccaa Tuulamaa fi barattoota Oromoo Yuniversitii Finfinnee biroo waliin hidhamee miidhan guddaan irra gahaa ture. Kophaatti adda baafamee hidhamuun reebicha bultii 14f utuu wal irraa hin cinne irra ga’een, Bitootessa 28, bara 2006tti mana yaalaa Minilikitti osoo wallaansa tokko illee hin argatiin hiriyyoota isaa harkatti boqote.
Yaadannoo FDG kanaan hin dhaabbatu; bara 2006-2016 keessatti immoo daran jabaatee itti fufee jira; kana immoo yaadannoo FDG kutaa lamaffaa keessattin qabadhee dhiyaadha. Nagaan!
Next: Waliigaltee Dadhabbii Malee Gatii Hin Qabne